22W မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT ဖြစ်လာပြီ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
22W မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT ဖြစ်လာပြီ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 22W ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည် LUPIT လို့ ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ရရှိတဲ့ T2K သတင်းများအရ LUPIT ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁ဝ၁ဝ ခန့်မှာ ဗဟိုပြုနေတာဖြစ်ပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီလျှင် ၁၉ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ မိုးလေဝသ ဧရိယာကိုဝင်လာဘို့ ၂၂၅ မိုင် ခန့် လိုသေးတာဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းရဲ့ လက်ရှိအရွယ်အစား အချင်းကီလိုမီတာ ၅၂ဝ (၃၂ဝ မိုင်ခန့်) ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၁ဝဝ ကီလိုမီတာ (၇ဝ နော်တီကယ်မိုင် – ၆၃ မိုင် ခန့်) မှ ၁၃ဝ ကီလိုမီတာ (၈ဝ မိုင်နှုန်း ခန့်) ရှိပြီး အထက်ပါတိုင်းထွာချက်များဟာ ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် နံနက် ၆ နာရီမှာ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
LUPIT, meaning: Cruel; viciousness. Name contributed by: Philippines.
One Response to “22W မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT ဖြစ်လာပြီ”
LUPIT rencent sat-photo
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 22W ၏လမ်းကြောင်း update
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT အားပိုကောင်းလာဦးမည် »